Colaadu waa inay dhamaad yeelataa (Suldaan Idiris Suldaan Axmed ) | raascasayrmedia.com
← Dhalinyaro qorshaynaysa kacdoono ka dhan ah DKMG iyo Shabaab
Danjire Mahiga oo mar kale Muqdisho booqday (SAWIRRO) →
February 12, 2011 · 11:18 pm
Colaadu waa inay dhamaad yeelataa (Suldaan Idiris Suldaan Axmed )
Dhamaan ammaan oo dhan waxay u sugnaatay allaah (swt) ee nagu manaystay nimcooyin badan oo aan xisaab lahayn iyo rasuulkiisii suubaanaa Muxamed (csw). Intaa kadib waxaan salaamayaa guud ahaan Muslimiinta, gaar ahaan kuwa Soomaaliyeed
Waxaan u soo jeedinayaa dhamaan umada soomaalieed meel kasta oo ay joogaan ee dhibaatada haysato inay marka hore is cafiyaan oo illah u tooba keenaan lagana waantoobo waxyaabaha keenaya xasilooni darada .
Sidaan wada ognahay dalku waxa uu baaba yahay 21sano dhibaato aad u daran ayaa haysatada bulshada soomaaliyeed waxaana lagaga bixi karaa dhibkaas iyada oo ay isu yimaadaan dhamaan Isimada soomaaliyeed meelkasta oo ay joogaan lana lafaguro sidi ay u soo laaban lahayd xasiloonidi iyo hanaanki dawladeed ee ay soomaaliya lahayd .
Waa in dadka soomaaliyeed ay habka ay hada u fakaraan oo ah mid aan qumanayn ay wax ka badalaan waa in laga fogaadaa waxyaabaha keeni kara inay sii socdaan dhibaatooyinka maanta jira sida qabyaalada oo ah mid aad u waxyeelaysay dalka soomaaliya qabiilku waa inuu ahaadaa mid lagu abtirsado lakiin haddi uu ahaado sida soomaalida mid la isku waxyeeleeyo waxaan oran karaa waa jaahilnimo .
Inaga oo ah dad 100% Muslimiin ah hadana is laynaaya 21sano waa wax aad looga xumaado waan aragnaa dadka soomaaliyeed ee ku dhibaataysan daafaha dunida, kuwa badaha ku qaraqmay ,kuwa jeelsha ku jira mudooyinka , hooyo iyo ubadkeedi is waysan mudo waxyaabahaasu waa inay ahaadaan kuwo ina damqa tusaalana inoo ahaada .
Dhinacyada iska soo horjeeda ee ku dagaalamaya Koonfurta soomaaliya waa inay joojiyaan dilka shacabka masaakiinta ah ee soomaaliyeed waana inay miiska wada hadalka yimaadaan waan la soconaa xabadu inaan xal ku iman mid ku sii fogaada ma ahane halka ay ina marinaysona waa in laga soo laabtaa .
Waa in dhalinta soomaaliyeed ee aqoonyahandaa ahi ay ka shaqeeyaan kor u qaadida isku xirnaanshaha umada soomaaliyeed iyo wacyi galinta bulshada si ay meesha uga baxdo afkaarta xunxun ee ku salaysan Qabyaalada ee la isku wax yeelaynaayo Dhalinyaradu waa mustaqbalka wadanka waa in laga fakaraa mustaqbalka jiilasha bambe sidi ay ugu noolaan lahaayeed dalkooda oo nabada kuna heli lahaayeen nolol wanaagsan .
Waa inay joojiyaan dadka soomaaliyeed midab takoor oo shacabka soomaaliyeed qaybo ka mid ah la leeyahay waa dad dhiman arintaas oo ah arin aad u fool xun oo qofki damiir lihi uu ka danqado waa in la helaa xal kale oo ka badalan nadaamkaan ay ku dhisan tahay hada dawlada soomaaliya ee ah mid lagu saleeyay 4.5 oo ah mid ka turjumaaya in dadka soomaaliyeed ay kala awood sareeyaan waa in la taageeraa wax kasta oo wanaagsan .
Dadka soomaaliyeed ayaan oran karaa waa dad aad ugu fogaaday qabyaalada isku waxyaylaynteeda hadaba waa in laga soo noqdaa oo dhamaan dadwaynaha soomaaliyeed ay gacmaha is qabsadaan taageeraan dhamaantood dawlada soomaaliya iyaga oo aan eegayn wax hoose sida reer oo ah mid hoose ee waa inay eegaan dadku danta guud iyo magaca soomaaliyeed haddi aan taas la soo celin waxaynu ahaanaynaa mustaqbalka dad ka tirtirma dunida waa in aynu is bar qabaanaa ,illahna u toobad keenaa .
Gobolada Maamuladu ay ka jiraan Sida Somaliland iyo Puntland waa inay iska ilaaliyaan waxyaabaha wiiqi kara nabada ka jirta waa inay sugaan amniga waa ku amaanan yihiin sida wanaagsan ee ay uga shaqeeyeen nabada goboladaas waa in ay ahadaan meelo ay u soo hayaamaan dad waynaha kale ee soomaaliyeed ee dhibaatada ka soo carara shacabka ku dhaqan meelaha maamuladu ka jiraan waa inay soo dhoweeyaan walaalhooda soomaaliyeed ee u yimaada ee ka soo baxsadey dagaalada .
Qabqablayaasha ama dadka hogaamiya qabiilada ee iyagu ku doonaaya danahooda gaarka ah hab qabiil waa inay shacabka soomaaliyeed iska ilaaliyaan oo aanaysan taageerin, shacabku wa inay iyaga ka timaadaa nabad guud oo dalka oo dhan ka dhacda waa in ururo rayid ah oo wacyi galiya bulshada la helaakana shaqeeya kor u qaadida adeegyada bulshada taakulaynta dadka dhibaataysan iyada oo si mutadawacnimo ah loogu adeegaayo lana is xilqamaayo.
Waxaan ku soo gabagabaynayaa waa in soomaaliya dhexdeeda lagu qabtaa shirwayne ay isugu yimaadaan dhamaan Isimada iyo aqoon yahanada soomaaliyeed lagu soo dhiso dawlada soomaaliyeed oo dib u soo celisa hanaanki dawladeed ee dalka ka jiri hiray waxaan qabaa in soomaalida dhexdeedu ay go,aansan karto aayahooda ,
Waxaan alle ka baryayaa in uu naga dulqaado dhibaatadaan dabada dheeraatay ee cid walba saamaysay illah na waafajiyo sida toosan quluubta dadka soomaaliyeed illah isu galiyo raxmad . abaaraha ka jira dalka guud ahaan in illah ka qaado oo raxmad khayr qabta na siiyo Amiin Yaa allah .
Suldaan Idiris Suldaan Axmed Dooxajoog
Filed under COMMUNITIES, MAQAALO, NEWS
One response to “Colaadu waa inay dhamaad yeelataa (Suldaan Idiris Suldaan Axmed )”
waxaan duco iyo amaan gaar u jeedinayaa
Suldaan Idiris Suldaan ahmed, waxa uu inoo soo jeediyey
guubaabo, talooyin wax ku ool ah, duco iyo guubaabo, ilaahey ajar ha ka siiyo, waa wax loo baahan yahay in isimadu ay noqdaan dad dhalin yaro ah oo aqoon leh oo la jaan qaadi kara wacyiga jira.
waa in aan raacno talooyinkaa hadeynu nahay dhalin yarada soomaaliyeed, dalkana nabad ku soo dabaalo, waa in aan fursan u siino dhalin yarada soomaaliyeed in ay ka qeyb geli karaan tartamada ka dhacaya dunida daafaheeda